Tafiotra, avandra sy ora-nikija teto an-drenivohitra: tanàna maro dibo-drano, taxi-be iray nianjeran’ny hazo | NewsMada
Nampitondra faisana ny mponin’Antananarivo sy ny manodidina iny orambe sy tafiotra narahina havandra namely tampoka, omaly, iny. Maro ny tanàna dibo-drano, tany mihotsaka, hazo tapatapaka…
Manohatra ny rivodoza nandalo ny takaitra navelan’ilay rivo-mahery narahina ora-mikija sy havandra, omaly, teto Antananarivo sy ny manodidina. Maizina ny andro nanomboka tamin’ny 03 ora tolakandro teto Antananarivo ary namaky lanitra ny kotroka sy ny tsela-baratra.
Narahina rivotra nifofo mafy izany ary nirarakompana ny havandra niaraka taminy. Nijojo ny orana avy eo ary sady mafy fiavy no nasafotofoton’ny rivotra. Nikapokapoka ny filatsaky ny havandra tamin’ny fitaratry ny fiarakodia. Na nitsahatra aza ny havandra, mbola nikija nandritra ny fotoana maharitra ny orana.
Maro ny toerana dibo-drano tampoka tao anatin’ny adiny iray nirotsahan’ny orambe. Anisan’izany ireo faritra iva eto Antananarivo toy ny eny Andravoahangy, Behoririka, Besarety, Antanimena, 67ha, Isotry, Ambodivona… Nikarama tampoka nitatitra olona hiampita arabe ny sarety sy ny posy. Maty an-dalana kosa ireo fiara madinika nandeha tamin’ireo lalana dibo-drano. 500 Ar ny nampita ny olona iray tamin’ny sarety tetsy Besarety, rehefa nitsahatra ny orana.
Ankoatra izany, nisy ny hazo tapaka izay namoa-doza nianjera tamina taxi-be tetsy Antanandrano. Voa mafy ity fiara ity, saingy soa fa tsy nisy olona naratra tao anatiny. Tao ny tafon-trano nentin’ny rivotra toy ny teny Ambohimanarina, takela-by nianjera, tany nihotsaka, tamboho nirodana…
Tetsy andaniny, nanimba zavatra ny havandra, indrindra ireo mpamboly manodidina an’Antananarivo. Ravarava ny vokatra kely mba nandrandraina. Potiky ny karazan’anana, izay tokony hamidy. Tapitra nihintsana ny voam-bary efa matoy teny an-tanimbary. Tamin-dranomaso no niandrasana ny fitsaharan’ny orana ho an’ireo tantsaha.
Nanambara ny mpamantatra ny toetr’andro fa mbola hitohy ny orana tandrifin-drahona, mety hikorontana toy ireny amin’ny faritry ny afovoan-tany ka anisan’izany ny eto Analamanga. Mila mivonona amin’izany ny rehetra.